Isbarbardhigga Nexus 5x / 6P cusub iyo iPhone 6s | Wararka IPhone
Isbarbardhiga u dhexeeya Nexus 5x / 6P cusub iyo iPhone 6s
Dhacdadii bilaabatay shalay 18:00 pm, Google waxay soo bandhigtay noocyadeeda cusub ee Nexus, Nexus 5X oo ay mar kale soo saartay Google, iyadoo sii socota Nexus 5 hore, oo ku taal aagga dhexe-dhexe iyo qiime aad u tartan badan isbarbardhiga. Dhanka kale Nexus 6P, Google Phablet oo ay samaysay shirkadda Huawei oo leh qeexitaanno aan waligeed lagu arkin qalab kaas oo nidaamkiisa hawlgalka uu yahay Android, jir unibody ah oo gebi ahaanba laga sameeyay aluminium iyo markale qiime dhexdhexaad ah, oo leh astaamo ka baxsan dhammaadka-sare
1 Nexus 5X, LG waxay ku sii socotaa xadka Nexus.
2 Nexus 6P, oo ah nooca Google iyo Huawei
Nexus 5X, LG waxay ku sii socotaa xadka Nexus.
LG waxay go'aansatay inay soo saarto Nexus-ka dhexdhexaadka ah ee jirka ku jira, iyadoo ulajeedkeedu yahay yareynta kharashka iyo culeyska, hase yeeshe, gudaha waxaa laga gaarayaa xoqid, iyadoo shaashadda 5,2 inji oo leh muraayadda Gorilla Glass 3. Xuquuqda muraayadan adag ee adag waa guddi IPS ah oo muujinaya xallinta 1080p oo bixisa 420 pixels halkii inch si loogu raaxaysto faahfaahin kasta.
Marka laga hadlayo miisaanka, 136 garaam iyo dhumucdiisuna tahay 8mm oo iyada oo aan sida ugu fiican ahayn loo hoggaansamin Hoos, wadnaha ka kooban hal Processor Qualcomm 808 oo leh 64Bits technology iyo lix xudun oo 2 GHz ah, oo laga helay gacanta Adreno 418 GPU iyo 2 GB oo DDR3 RAM ah. Marka la eego awoodaha, markan Google iyo LG waxay ogolaan doonaan oo kaliya laba, 16 GB ama 32 GB iyadoon wax suuro gal ah aan lagu balaarin kaararka xusuusta.
Dhinaca kale kaamirooyinka, 12,3 MP dhanka hore, ku dhowaad waxay lamid tahay iPhone 6, oo leh labalaab midab leh, hore waxay kuxiraysaa kamarad 5MP ah, markale waxay u egtahay iPhone. In kasta oo maroojinta uu bixiyay akhristaha faraha ee dhabarka taleefanka, in kasta oo aan la ogeyn sida uu u shaqeynayo, haddana waxay umuuqataa mid la mid ah TouchID, iyadoo la badbaadinayo kala duwanaanshaha. Waxa ugu fiican, qiimaha, 379 Dollar astaamaha dhammaadka-sare, oo lagu heli karo saddex midab, buluug, caddaan iyo madow.
Isbarbardhiga iPhone 6s waa mid adag, gaar ahaan laga bilaabo qalabka iyo qiimaha. Waxaan xasuusnaa in iPhone 6s uu yahay terminal ka kooban 7000 aluminium, oo leh Jiilka labaad ee TouchID waxqabadka la xaqiijiyay, marka la barbar dhigo dareeraha faraha ee LG Nexus 5X oo aan waxba laga aqoon. Marka laga hadlayo shaashadda iyo kamaradda, astaamaha la midka ah, keydinta faraqa in iPhone-ka uu leeyahay 3D Touch.
Nexus 6P, oo ah nooca Google iyo Huawei
"Dhamaadka-sare", Google waxay doorteen Huawei. Iyada oo shaashad cajaa'ib leh oo 5,7-inji ah iyo xallinta QHD ee 256 x 1440 pixels, taas oo u dhiganta 515 pixels aan ka fiirsan lahayn halkii inji, in ka badan 100 pixels halkii inch ka sareeya iPhone 6s Plus, xifaaltankaaga macquul.
Marka ay timaado kaamirada, tirooyinka hoostooda waxay umuuqdaan kuwo si aad ah isugu eg, dareeraha dareeraha laser-ka ee Nexus wuxuu umuuqdaa rajo, laakiin waxaan u isticmaalnay taleefannada Apple-ka inay kudhamaadaan waxqabadka tartanka nolosha dhabta ah, sawir maalinlaha ah.
Xaalada kiiska Nexus 6P wuxuu qariyaa Qualcomm Snapdragon 810 v.2.1 oo leh tayo iyo awood la xaqiijiyay, gacanta gacanta 3GB oo RAM ah taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah aaladaha ugu fiican ee Android, marka la barbardhigo 2GB ee RAM ee iPhone, waxaa iska cad in halkan uu yahay nidaamka qalliinka ee farqiga u badan laga sameeyay, Android 6.0 wuxuu ballan qaadayaa horumar weyn. , inkasta oo cayayaanka ugu dambeeya ee maaraynta RAM ee nooca ugu dambeeya ee Android u muuqdaan kuwo daciif ah. Si kastaba ha noqotee, qalabkan tayada sare leh, waxqabad weyn ayaa laga filayaa Nexus sida caadiga ah qalabkeeda oo dhan.
Nexus 6P wuxuu leeyahay isku xiraha USB-C oo leh amar-soo-deg deg ah iyo iyada qiimaha wuxuu ka bilaabmayaa $ 499 nooca 32Gb, $ 549 qaybta 64Gb iyo $ 649 qaybta 128Gb. Si kastaba ha noqotee, mar kale waa lagama maarmaan in la tilmaamo in aanan garanaynin hawlgalka akhristaha faraha ee Huawei Nexus, marka la barbar dhigo tayada la xaqiijiyay ee jiilka labaad ee TouchID, iyo dabcan, Nexus 6P ma laha tiknoolajiyad jawaab-celin ah. ama cibaaro weyn oo iPhone 6s Plus ah, 3D Touch ah oo lagu ogaado cadaadiska garaaca wadnaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Isbarbardhiga u dhexeeya Nexus 5x / 6P cusub iyo iPhone 6s
Marnaba awood uma yeelan kartid inaad sameysid falanqeyn ujeedo leh, had iyo jeer waa inaad ka tagtaa calaamadda ah in wax kasta oo Apple ka wanaagsan yihiin.
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaad noo sheegto waxaadan u maleynaynin ujeedada boostada.
Haddii Apple ay ku jiraan kuwa ugu wanaagsan ee TouchID iyo tikniyoolajiyada 3D-ta ah ee aan laga heli karin Nexus, qarinta ma noqoneyso inay ujeedo ka dhigato.
Runtii waa wax laga xishoodo in la arko isbarbardhiga noocan ah. Iyagu waa markasta calaamadeynta iphone-ka sida ugu fiican, waa inay noqdaan kuwo dhexdhexaad ah.
Jawaab Fabricio Roveda
Maxay yihiin dhinacyada aan sheegnay in IPhone-ka uu ka fiican yahay isla markaana uusan u dhigmin xaqiiqda? Waxay noqon laheyd wax dhisid badan in lagu daro faahfaahintaas dhaleeceynta.
Ku jawaab macwave
waa € 1079
Ma bixinayo nexus 650 € ama waalan markii ka hor intaan la dhihin tufaaxu qiimaha ayuu kordhiyay, maxay ku sameeyaan nexus waa maxay? Haddii aad ii sheegto inay u egtahay tallaal sida midka tufaaxa oo kale, waa hagaag, laakiin marka hore waxaan isku tuurayaa tijaabo ama hawiye.
maadaama uu tifaftire ka yahay baloog ka hadlaya tufaaxa. Waan fahamsanahay inaad tiraahdo iphone-ka ayaa kafiican dhinacyada qaar; Aragti ahaan, dabcan, sidaad sheegto, waxa aanan fahmin waa sababta ay tahay inaad uga hadasho google. Waxba kama siinaayo taleefankaas oo haddii aan doonayo inaan ogaado waxaan aadi doonaa bogag aad u culus oo ka hadlaya arrintaas. Simon ayaa yidhi.
Waxaan badanaaba sameynaa isbarbardhigyadan, markaa adeegsadayaasha ka fikiraya inay galaan macruufka ama ka baxaan macruufka ayaa miisaami kara beddelaadaha.
Hagaag, waxaan arkaa falanqayn aad ujeedo iyo dhexdhexaad ah. Waxay ku xaddideysaa inay sharraxdo iyaga, iyada oo ay adag tahay in wax xukun ah oo qiimo leh.
Waxaan rajeyneynaa in tifaftirayaasha intiisa kale ay raacayaan qaabkan. Wax yar oo xanaaqa akhristaha iyo macluumaad dheeri ah.
Ku jawaab antonio vazquez
Sideed ku ogtahay in Apple taabashada id ay kafiicantahay hadaadan isku dayin midka Nexus, iyo «cibaaro weyn oo 3d taabasho ah! Waan fahamsanahay in Apple ay ku quudineyso, laakiin ha noqon mid lagu qoslo.
Hello Damien, waxay umuuqataa in adiga 3D Touch uusan aheyn wax ugub ah, waan fahmay markaa inaadan isku dayin Macbook Pro Retina ee Force Touch oo aadan aqoon barnaamijyadiisa. Hadday sidaas tahay oo aysan u muuqan wax cusub, ma ogi nooca teknoolojiyadda aad rajeynayso inay ku dari karaan taleefanka.
Waxaad adigu iska dhex arki kartaa sida Google ay isugu koobtay in ay "mishiin dheeri ah" ku darto Nexus-keeda iyo akhristaha sawirka faraha, kaas oo shirkadda Apple ku jiray in ka badan laba sano.
Facebook Messenger waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu daray jawaabta degdegga ah
Soo ogow haddii iPhone 6s-kaaga uu leeyahay processor A9 oo ka socda Samsung ama TSMC